ကိုဗစ်ကို ပုသိမ်မှာ အနိုင်တိုက်မယ့် မီးအိမ်ရှင် ဆရာဝန်ကြီး - Zet Star
ကိုဗစ်ကို ပုသိမ်မှာ အနိုင်တိုက်မယ့် မီးအိမ်ရှင် ဆရာဝန်ကြီး
မီးအိမ်ရှင်ကြီး… အိပ်မက်လှလှ.. မက်ဘူးလား…
ကျတော်တို့ ပုသိမ်ကို မီးအိမ်ရှင်ကြီး တာဝန်ကျကတည်းကပျော်လိုက်ကြတဲ့ ပုသိမ်သားတွေ အခုလက်ရှိ ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ ကြားကနေကို လာလှူလိုက်တာမှ တကယ်အံသြစရာပါဘဲ.. မီးအိမ်ရှင်ရဲ့ စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်မှုတွေကို ပုသိမ်သားတွေတကယ်ကို အသိ အမှတ်ပြုတယ်ဆိုတာ သက်သေပါ….
အဲ့ဒါတွေခဏထားလို့ မီးအိမ်ရှင် ယခုကာလဖြတ်သန်း မှုကို လေ့လာလိုက်ရအောင်…. ကိုဗစ် ပထမလှိုင်းကိုတိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဒုတိယကြိမ်မလာခင်ကဘဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ အစီအစဥ် ချကာ အသက်ရှူစက်များ လူနာများနေစရာအခန်း၊ အခန်းအတွင်း အဲကွန်း အိမ်သာအစရှိသည့် လူတန်းစေ့အဆင့်တန်းမျိုးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာ မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခု ဒုတိယလှိုင်းအတွက် ဆေးရုံကြီး မှာ အဆင်သင့်ဖြစ်ပေမယ့် မထင်မှတ်ထားတဲ့ ကူးစက်မှုတွေတိုးလာတော့ အစီအစဥ် အသစ်အနေနဲ့ ABCD ကိုပြန်လည်ချမှတ်ရပြန်ပါတယ်။ ယခု တိုင်းရင်းဆေးရုံ ကိုပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပြီး ကုတင်နှင့် အဲကွန်းများကို ပါတပ်ဆင်နေတာကို တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးနောက် လူငယ်ဘောလုံးအကယ်ဒမီကျောင်းကိုလည်း အစီအစဥ် တစ်ခုအနေနဲ့ လျာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
မနက်ပိုင်းကျတော့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဥ်အတွက်ဆောင်ရွက်လိုက် ဒီကြားထဲ contact လူနာတွေကိုထားဖို့ စီစဥ်လိုက် အလှူရှင်လာရင်ပြေးလက်ခံလိုက်..ပိုးတွေ့လူနာစစ်ဆေးလိုက်၊ သာမာန်လူနာတွေကို အားပေးလိုက်၊ ဓာတ်ခွဲခန်း အတွက်ဦးစီးလိုက်..ဒီဲကြားထဲ ပြင်ပက ကောလာဟလတွေကို ဖေ့ဘုတ်ကနေ ပြန်ရှင်းလိုက်နဲ့ လုံးလည် ပတ်ချာလိုက်နေတော့တာပါပဲ။
ညဖက်ကျပြန်တော့ ဘယ်အချိန်အိပ်သလဲကိုမသိတာ.. ဆရာကြီးဆီကလူနာ စာရင်းမတက်မချင်း မအိပ်ဘဲ စောင့်နေတဲ့သူတွေ အများကြီးပုသိမ်မှာရှိပါတယ်.. ကျတော်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျတော် ဆရာကြီးလောက် အလုပ်လည်းမများပါ။ ခေါင်းစားတဲ့အလုပ်လည်းမလုပ်ရပါ။ သို့ပေမယ့် ညည့်နက်တော့ အိပ်ချင်ငိုက်မြည်းတာပေါ့…..ညကအဖြစ်အပျက်ဆိုရရင်.. ဆရာကြီးက ၁၂နာရီလောက်က ပို့စ်တခုတင်တယ်..ပြေးပြီးကြည့်လိုက်တယ်..ပိုးတွေ့လူနာစာရင်းမဟုတ်ဘူး…တနေ့တာအလှူရှင် စါရင်းတင်တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့တော့ တင်တော့မှာဘာလေဆိုပြီး စောင့်တယ်..ခဏကြာတော့ ထပ်တင်တယ်.ပုသိမ်အတွက် အစီအစ် အသစ် လုပ်ထားတာကို တင်ပါတယ်…ကျတော်လည်းအားခဲထားတယ်။ ပြောမယ့်သာပြောတာ…အိပ်ငိုက်တာ လက်ကဖုန်းပါပြုတ်ကျတယ်။ ဆရာကြီးက မတင်သေး…ည ၁နာရီထိုးတော့ ဆရာကြီး လူနာများလို့ နောက်ကျမှတင်တာထင် ဆိုပြီးတွေးနေချိန် ကိုယ်က သရေပါကျနေပီ အိပ်ချင်တာ..
နောက် ၁နာရီ၁၀မိနစ်မှ ပိုးတွေ့လူနာစာရင်းကို တင်တာတွေ့မှ မျက်လုံးပြူးသွားတယ်… မနက်အစောကျပြန်တော့ ညကပိုးတွေ့လူနာနဲ့ ထိတွေ့တဲ့သူတွေကို ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲကို ပရဟိတအဖွဲ့တွေ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ ထပ်စီမံရပြန်ပါတယ်… ဒါကြောင့် ဆရာကြီးဘယ်အချိန်အိပ်သလဲတော့ မသိဘူး…ကျတော်မေးချင်တာကတော့ မီးအိမ်ရှင်ကြီး ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ပြီး အိပ်မက်လှလှလေးများ တခါလောက်မက်ဖူးလာလို့ဘဲ မေးလိုက်ချင်ပါတယ်..
← မြန်မာပြည်မှာ အခု ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေတာပါ (မျက်ရည်ကျမိတဲ့ မြင်ကွင်းလေး တခု)
ဖောင်ကြီးဆေးရုံ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်ထဲက ညနေခင်းတိုက်ပွဲ →